kubudikidza Carisa Peterson
Last updated: Jan. 13 2018 | 3 Maminitsi verenga
A pamazita nzira yokuziva pachako zvishoma nani, kuita iwe "pane lotta zvishoma" zvikuru dateable
Chikanganiso vanhu vakawanda muupenyu vachifambidzana upenyu haasi vane pfungwa yakanaka ivo, pachavo, ndivo. Zvingaita sokuti counterintuitive, asi kana uchipinda kuedza kuwana shamwari nderimwe yakanakisisa nguva pfungwa pachako uye chii chinoita iwe “chishambwe”. Women, kupfuura vanhu, havatani “I Like Chero You Like”-urwere (pamwe nokuda vanoswerera tsika netarisiro kuti vakadzi vanofanira kuva vanhu kuchinja, amorphous ndivo kushayikwa zvavanoda), pakupedzisira zvichiguma ari hahugutsi uye unfulfilling ukama panguva yakanakisisa; uye zvinoshamisa, kutambisa nguva uye hasha pane mumwe munhu ane “change”, akaipisisa.
Mumwe wangu kufarira mashoko anoenda chinhu chakadai–sei munhu anofanirwa kuziva uye kuda iwe, kana usingazivi uye dzinokuda? Bhizimisi nokuziva pachako Akakubvumidza kuziva chaizvoizvo chii imi kuunza tafura, uye anoita kuti zvive nyore iwe Right Mumwe kucherechedza mumwe uye anofarira unhu havasi kuzochinja pamwe boka rako kana makore.
Sezvo wakabva wabata Silverstein anonyora nhetembo yake, “masiki”:
Aiva ganda yebhuruu
Uye saizvozvo iye
upenyu hwavo hwose kuburikidza
Ipapo vakapfuura hwakarurama–
Hedzino dzimwe nzira yokuziva uye kukuda, zvokuti mumwe munhu anogona, wo!
1. Torai Yourself Out
Iyeyu ichipeperetswa achipoterera siyana uye zviuru “okuzvibatsira” Chisel, mabhuku, uye mapoka dzevakadzi. Vanhu kazhinji pafunge tichitarisa chisvusvuro, iyo kunogona kutyisa uye uchinyara kana usina vadya pachena oga asati. Saka unogona kuva chero chinokosha kwavaizoenda, chero sezvazvakaita mafaro uye chinhu hwauinawo–firimu (kamwe mwenje kuburuka, hapana dziri agere oga), bhora mutambo, kana zvichida rwendo zuva kumwe idzva.
2. Unodei Kuitira Today?
Vamwe vakasununguka nguva? Rega kweminiti uye vanorega nemaune zvibvunze chii chingaita kuti vafare ipapo ipapo–uye ipapo uende kuzviita! Uyu ndiye ndeimwe nyore uye inobudirira nzira zvimiti munzeve ruzha upenyu uye kumisa kutambisa nguva kuburikidza vakanwa kupinda Facebook kana terevhizheni. It Unodziurawo vachikukumikidzai vakawanda asingashumbi, mashiripiti dzinokanganisa uye majana, uye uchisangana kuti vanhu vakawanda kupfuura iwe aizofanira, asingafungi uye mukusaziva kuuraya nguva. Mukuita, muchaona kuti haudi munhu pamwe kuti tifare–unogona kufara uye indulgent nokuva chinangwa nezvisarudzo yenyu.
3. Bvunza Friends Your
Ichi chinhu elaboration chakakurumbira Facebook basa kukumbira vanhu mhando kuti vataure kuti pambiru aine shoko anorondedzera posita. Asi iwe unogona kudzidza nezvako, kana pamusoro kuruzhinji fungidzira uye pfungwa pachako, nokubvunza shamwari dzako kuti vangadai tsanangura iwe. Izvi zvichabatsira kuti chibwinye “iwe” kuti uri kupa kune nyika, uye saka mazuva. pamwe, uye angangodaro, ichi machisi pamwe zvaunotenda zvako yokuzvipira kwechokwadi. Asi kana uri mukusaziva vachinzwisisa seane yakasiyana hunhu pane zvaunoziva kuti ichokwadi pamusoro pako–izvi zvinganzi kuratidza sezvo tambo kundikana, dzinovhiringidza ukama.
4. Edza Zvinhu New
Uyu ndiye zvakapesana mhando #2. Pane kubata pachako kuti chinhu chaunoziva waunonzwa kuita kuita, kuita chinhu zvachose chitsva! Never noruvengo bhiza pamberi? Find kambani inopa nyore muhwezva Vatasvi. Handidi dzichitsigira kuita chinhu kutyiswa ari inotakwairira kure nemi, nekuti–apo kuti kukwezva mazuva–kutya kwako kanganisa kubva kukwanisa kunakidzwa chiitiko chitsva. Panopera zuva, unenge voga mumwe upenyu ruzivo inobatsira kutsanangura iwe uye zvaunoda, uye imi muve nomumwe unyanzvi uye kukurukura pfungwa kuti tafura.
Kuva nechivimbo pfungwa kuzvida anokwezva. Nokukudziridza pfungwa dzako nokuzvidzora, iwe uchava anofara, zvakawanda akazadzisa munhu uye muchava kuti zvakawanda kupa kune ukama; uye panguva ino, uchava yakawanda kunonakidza kuwana kuziva kwamuri kuti imi mose muri pamusoro.
Click kugoverana musi Google+ (Unodziurawo pahwindo itsva)
Sei Kiss muna 5 Easy Matanho
6 Zvinhu Zvinokosha Men Funga About Munguva Sex
5 Actionable Tips kukwezva mukadzi Dreams Your
7 Sex Facts Ruchagara Ridzai Pfungwa Dzako
7 Nhema About Sex
Member Safety Redu Top Pokutanga
7 Ugly Pazvikanganiso Women Ita Kuti Matongo Chero Chances ane Relationship
How Zvokupfimbana on Facebook
5 Zvikanganiso Varume Ita Kuti zvingakanganisa ukama
+ Dating muAustralia
+ Dating kuIreland
+ Dating mu New Zealand
+ Dating mu South Africa
© Copyright 2018 Date My Pet. yaakaita kubudikidza 8celerate Studio